Ngakho amadoda nabesifazane abaningi ngokuhamba kwesikhathi, aqala ukuqaphela ukuthi agibela izinwele. Kukhona imibuzo eminingi, okuyinto kwaba isizathu inkinga nendlela yokubhekana naso. Nezinwele - inqubo nsuku zonke futhi ejwayelekile, kodwa uma kwenzeka ukulinganisela. Uma ngaso sonke isikhathi ngemva ecwaninga noma ukugeza ulahlekelwe ke, kuyafaneleka ukucabanga ukuthi iyiphi indlela ukubhekana neqiniso lokuthi izinwele enyuka. Phela, uma isikhathi akanayo ukubhekana nale nkinga, kungenzeka futhi Bald.
Izizathu ezibangela nezinwele ngokuchichimayo. Temperature amathonsi, izigqoko abaseduze, ukucindezeleka futhi sindisa ngokomzwelo - konke lokhu kakhulu kuthinta isimo sabo. Ngaphezu kwalokho, nezinwele zingaqhubekela senziwa ngokweqile wokuzilibazisa umdwebo, permed, usebenzisa zonke izinhlobo dryers for omiswe, ezishisayo, ploek. Konke lokhu waphakamisela kuthinta isakhiwo izinwele, okuholela iqiniso lokuthi izinwele enyuka. "Yini?" - ecela labo okwakuye kwadingeka ukubhekana nalokhu inkinga.
Lahla senkinga nezinwele kungaba, uma ulandela iziqondiso ezithile. Kulabo abathanda kakhulu ushintsho isithombe, kubalulekile ukuba bahlehlise ke futhi unike izinwele zakho ikhefu zavivok nopende izingqimba. Uma kungenzeka, kufanele kuncishiswe ukusetshenziswa ploek ahlukahlukene kanye dryers ukuthi ome futhi abhubhise izinwele. Ungenzi kwamagoda Friend too futhi ponytails nokuhamba ngaphandle hat sezulu ezinomoya ezibandayo.
Buyisela izinwele ezilimele ukusiza zonke izinhlobo buso izinwele, isibonelo, buso egg isikhuphasha, rye isinkwa, whey efudumele. Siza futhi Iziphungo of sembabazane, burdock impande noma ifulege amnandi.
Labo ukukhuphuka izinwele, kuzosiza ukuxazulula le nkinga njengoba burdock. Amafutha sasivele ku ekhanda futhi ugeze off emva isigamu sehora yamanzi afudumele. Amafutha ingasetshenziswa ngokuhlanganyela burdock imoto ukuthi kuyoba nemiphumela obuphathekayo.
omama abasakhula sebeqala uqaphela ukuthi ukukhuphuka izinwele emva kokubeletha. Lokhu ngokuvamile ngenxa yokuntuleka njalo ubuthongo, ukucindezeleka, ukusebenza ngokweqile, ukungabi izakhi ezithile trace, kodwa kungenzeka kubangelwa ukuwa izinga lama-hormone zesifazane - estrogen ngesikhathi lactation. Kuyancomeka kulokhu ukuphuza ekhethekile amavithamini for nabancelisayo, okuyinto ngeke ukulimaza umntwana, kanye ukudla ukudla lemvelo kanye fresh futhi ugweme ukudla imikhiqizo pickled ngibhema, okuyizinto engathandeki ngoba omama abasebasha.
Geza izinwele Kunconywa yami amashampu ekhethekile okuvuselela futhi zisebenzisa emva ukugeza namafutha-conditioner. Izinwele ngenxa lokhu kuzoba lula nekama, futhi kanjalo ngaphansi fall out. Ngaphezu kwalokho, ukusiza uhlikihla ikhanda, okuyinto okufanele enze ngesikhathi yokuhlanza yayo. Massage kuvusa kwegazi, kanjalo ukugeleza izakhi kanye amavithamini kuya hairline iphinde ivimbele nezinwele.
Uma okungenhla kungasizi futhi uma abantu belokhu banda izinwele, kufanele ufune afanelekayo udokotela usizo trichologist ngubani, ikhumbula izidingo zakho ngabanye, khetha indlela efanele ukwelashwa.
Hairstyle "uMnsalo" ngezandla zakhe
Zezinwele short kwabesifazane - kungcono stylish futhi ngokugqamile!
Izinwele udayi "ezingavamile". Incazelo yochungechunge, ukubuyekezwa
Cascade ukugunda izinwele izinwele naphakathi - kwekhanda jikelele
Zehena kungekho nto enemibala emihle - ikhambi izinwele
Sizokubonisa indlela ukoma izinwele zakho ngosizo ayina
Umdwebo by Botticelli "Spring" - omunye wemisebenzi emangalisa kunazo zonke art
Indlela ukusesha "google" izithombe nezithombe?
Amahemuhemu Ngethuluzi lomshini 'lomshini'
Iphutha 522. Ukuxazulula izinkinga
Indlela esiphatha ngayo ubisi amazinyo abantwana. wamazinyo Amathiphu
Indlela ukupheka isibindi ikhekhe nge izaqathe kanye amakhowe
Pheshana urinary ukutheleleka. Izimpawu, Izimbangela, Ukwelashwa
Hiro Nakamura kanye nezinye izinhlamvu yochungechunge ithelevishini "Heroes"
Ukuthenga eTurkey - umcimbi athandwa
Indlela ukufihla ikhasi "contact", noma Okufanele ukwenze uma bonke bakhathele?